ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း(ESIAs) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း | Myanmar Tender Portal
Tender ID: 18846
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် အကြံပေးလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: January 25, 2021 - February 8, 2021
ကုမ္ပဏီ အမည်: CITIC Consortium Myanmar Port Investment Limited
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း (ESIAs) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ရည်ညွှန်းအမှတ်စဉ် ။ ။ KPSEZ-DSP-RFP-2021-002
တင်ဒါခေါ်ယူမှုစတင်သော ရက်စွဲ ။ ။၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွား‌ရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ နှင့် Kyaukphyu Special Economic Zone Deep Sea Port Co., Ltd (စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူ Concessionaire) တို့သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် (Concession Agreement) ချုပ်ဆိုထားပြီးဖြစ်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူ Concessionaire အနေဖြင့် ရမ်းဗြဲကျွန်းဆိပ်ကမ်း၊ မဒေးကျွန်းဆိပ်ကမ်း၊ ယင်းတစ်ကျွန်း နှင့် တစ်ကျွန်းအကြား ပေါင်းကူးတံတား၊ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် စက်မှုဇုန်သို့ ခန့်မှန်းခြေ ၁၅ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရေနက် ဆိပ်ကမ်း (စီမံကိန်း) တည်ဆောက်ရန် ပုံဖော်မှု၊ ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်မှု၊ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းမှု နှင့် လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာတို့အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူ Concessionaire ၏ ဦးဆောင်အစုရှယ်ယာရှင် ဖြစ်သော CITIC Consortium Myanmar Port Investment Limited (Client) အနေဖြင့် စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး သက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း(ESIAs) (အလုပ်များ)ကို Concessionaire အား ကိုယ်စားပြုပြီး ဆောင်ရွက် သွားရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ယခုသည် အထက်ဖော်ပြပါ အလုပ်များအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ (RFP Documents) များ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်များ၏ အသေးစိတ်ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဆုံးတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင် ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ် (Environmental Compliance Certificate-ECC) ရယူနိုင်ရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း (EIA) လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အစီရင်ခံစာပြုစုခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်း (EIA Procedure) အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လိုအပ်သော အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကွင်းဆင်းလေ့လာဆန်းစစ်မှု စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်သည်။
(၁) စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ(EOI Letter)အား အောက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့ခြင်း။
(၂) လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ(RFP Documents) Electronic Version အား ဝယ်ယူရရှိရန်အတွက် ‌ အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ အား ဖော်ပြပါ ဘဏ်အကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်း။
(သတ်မှတ်ငွေပမာဏ လွှဲပြောင်းဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ (RFP Documents) Electronic Versionအား ရယူနိုင်ရန် Web linkတစ်ခုချပေးမည်ဖြစ်၍ ပေးသွင်းပြီးငွေကို ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း၊ ပြန်၍အမ်းယူခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းကို သတိပြုရန်လိုပါသည်။ )
စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအဆိုပြု တောင်းခံလွှာ (RFP Documents)ဝယ်ယူခြင်းတို့ကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ ( မြန်မာစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၃ နာရီ) ထက် နောက်မကျပဲ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်သည်။
လိပ်စာ –No. (B-02-01), Golden City Business Center, CMA Old Building, Yankin Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
တာဝန်ခံ –Mr. Zhu Xuyang (Email: zhuxy20@citic.com ; Tel: +95-9-979331299, +86-13522748848)
Mr. Yan Xiaoxian (Email: yanxx2@citic.com ; Tel: +95-9-445339138, +86-13811615808)
ဘဏ်အကောင့် - 694271050401 (SWIFT CODE: KWHKHKHH) at CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED (Bank Code: 018)
(၁) ဤတင်ဒါခေါ်ယူမှုကြော်ငြာကို အောက်ဖော်ပြပါ websites များတွင်လည်း ဖတ်ရှုရယူနိုင်ပါသည်။
- Facebook Account: CITIC Myanmar
(၂) လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ (RFP Documents) တွင် ပါရှိသော အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များအရ တင်ဒါလျှောက်လွှာများ သို့မဟုတ် အဆိုပြုလွှာများကို တင်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။
(၃) တင်ဒါပြင်ဆင်မှု သို့မဟုတ် တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် ကျသင့်သော အခြားအထွေထွေ ကုန်ကျငွေ များအားလုံးကို Client ဘက်မှ တာဝန်ခံမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု လုံးဝမရှိကြောင်းကို သတိပြုရန် ဖြစ်သည်။
(၄) လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံမှုလုပ်ငန်းစဉ် (RFP Process) အတွက် အခြားသီးသန့်ထပ်တိုး အသေးစိတ်အချက် အလက်များသည် အထက်ပါရည်ညွှန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ရရှိလာမည့် စာရွက်စာတမ်း များ၌ ပါဝင်ထားရှိမည် ဖြစ်သည်။
(၅) Online Briefing Meeting အား စီစဉ်ထားရှိပြီး ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အစီအစဉ်များကို successful applicants လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Invitation of the Letter of Interest (LOI) For purchasing Point of Sales Materials (Merchandising) and Semi Perminant POSM (Shelf)